Iimpawu ze-Pharyngitis | IBezzia
I-Pharyngitis, umqala obuhlungu, okanye i-tonsillitis? Nokuba ku la magama ahlala esetyenziswa ngokungakhethi Ukuthetha into enye, inyani kukuba ezi ziingxaki ezahlukeneyo. Umqala ungonzakalisa ngenxa yentsholongwane, ebangela ukudumba okujikeleze iitoni, kodwa hayi iitoni ngokwazo. Xa oku kusenzeka, zii-tonsillitis ezinokubangelwa zizizathu ezahlukeneyo.
Kodwa xa kukho i-pharyngitis, kwenzeka ntoni kanye ukuba i-pharynx iyavutha. Oku kudumba kwenzeka ngenxa yentsholongwane. Olu suleleko lubangela ukudumba okukhulu kwiitoni, kunye nakuyo yonke indawo yomqala. I-Pharyngitis ihamba kunye nentlungu, umkhuhlane, ubunzima bokuginya, kunye nokungonwabisi okuhlala kuhlala kangangeveki.
1 Ziintoni iimpawu pharyngitis
1.1 Unyango lwe-pharyngitis
1.2 Khusela i-pharyngitis
Ziintoni iimpawu pharyngitis
Ukujongana nomqala obuhlungu, kubaluleke kakhulu ukuthatha amanyathelo othintelo ukunqanda iziphumo ezinkulu. Nangona kunjalo, xa usulelo lwebacteria lusenzeka, kunzima kakhulu ukuthintela iimpawu ukuba zingaveli kwimeko nganye. Ukuze ufumane i-pharyngitis enokwenzeka, kungcono ukuya kwi-ofisi kagqirha ukuze ukongeza kuxilongo, Nika ikhosi yezibulala-ntsholongwane ezisusa usulelo.
Ezi ziimpawu ze-pharyngitis enokukunceda ukwahlula umqala obuhlungu obuvela kosulelo olufuna unyango lweziyobisi.
Umqala obuhlungu: I umqala obuhlungu luphawu oluphambili nolucacileyo lwe-pharyngitis. Ungabona apuxinzelelo olunamandla entanyeni yakho, kwindawo esembindini ejikeleze iitoni.
Ukudumba kweetoni: Xa kwenzeka ukudumba kwe-pharynx, iitoni zinokuchaphazeleka kwaye zitshiswe ngamandla. Intoni kuthintela ukuginya ngesiqhelo, ukuvelisa iintlungu ezomeleleyo nokuba kunesenzo esilula sokuginya amathe.
UmkhuhlaneUsulelo lunokubangela umkhuhlane, kunye nokuqaqamba ngokubanzi, iintlungu zemisipha kunye nobuthathaka. Ezi mpawu zifana kakhulu nezomkhuhlane.
I-lymph nodes ezivuvukileyo entanyeni: I-lymph nodes entanyeni zifumaneka kumhlathi ongaphantsi, uqhotyoshelwe entanyeni kunye ne-pharynx. Ukuba usulelo lubalulekile, iindawo zinokudumba kangangokuba zibonakala ngamehlo.
Eyona ndlela isebenzayo yokunyanga i-pharyngitis kukutyelela ugqirha wakho. Kubalulekile ukuba ingcali ihlalutye oonobangela be-pharyngitis, kunye nobukhali bayo, ukuze ichaze unyango olwaneleyo. Kuba umngcipheko wokungaphilisi le ngxaki ngokuchanekileyo unokukhokelela kwi-pharyngitis engapheliyo. Unyango lunokuhamba ngokungenisa ii-antibiotics ezithile kunye nokuthomalalisa iintlungu.
Ukungenwa lulwelo oluphezulu kubaluleke kakhulu, kuba ifiva inokubangela ukomisa. Ukongeza, kufuneka kongezwe ukuba ubunzima ekuginyeni kubangela ukuba kwiintsuku ezimbalwa ungafumani kutya okuqinileyo. Ke ngoko ukusetyenziswa kokutya okushushu okumanzi, umhluzi onesondlo, iijusi zendalo igcwele iivithamini kwaye kunjalo, amanzi amaninzi.
Ukuphumla yinxalenye ebalulekileyo yokuchacha. Unokukunceda umqala wakho uphilise ngokufaka isoda kunye namanzi. Zama ukuphumla kangangoko unako, sukuthetha ukunqanda ukucaphukisa umqala nangakumbi kwaye uvumele ukuba uphinde ubuye ngaphambi kokuba ubuyele kwimisebenzi yakho yesiqhelo.
Ukungafumani unyango olufanelekileyo kwimeko nganye, unako kubangela ukuba i-pharyngitis ikhokelele kwiingxaki ezinkulu njengosulelo lwendlebe okanye i-sinusitis. Ke kubalulekile ukuba ulandele iingcebiso zeengcali malunga nonyango. Ukongeza ekuthatheni amanyathelo ayimfuneko othintelo, abandakanya ucoceko lwezandla, ukuthintela iziselo ezibandayo kakhulu okanye ukukhusela intamo kwiindawo ezigabadeleyo.
Kwiimeko ezininzi usulelo lomqala lunokuphetshwa, ukuthatha amanyathelo okhuseleko. Ukuhlala kude nabantu ababonisa iimpawu ze-pharyngitis kubalulekile, ke, ukuba unabantwana ekhaya, kuya kufuneka uqiniseke ukuba abasondeli kakhulu ukubaphepha. Ukusetyenziswa kwemaski, kunye nococeko lwesandla kuya kukunceda ukhusele usapho lwakho koku nakwezinye iintsholongwane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Izifo » Iimpawu zepharyngitis
Ungasusa njani amabala etumato
Ukujamelana nemva kobudlelwane obunetyhefu